March 27, 2017 १४ चैत्र २०७३
बिचार सम्पादकीय हालसम्म यो प्रकारको कुनै पनि समाचार छैन | कला साहित्य view all
‘भृकुटी’ नाटकमा अभिव्यक्त ‘नेपाल–तिब्बत सम्बन्ध’
|| प्रकाश सिलवाल || काठमाडौँ, १४ चैत - राजकुमारी भृकुटीको विवाह भोटका राजासँग गर्ने विषयमा दरबारमा राजा रानीबीच अन्योल चलिरहेको थियो । एकदिन महारानीले भनिन्,“महाराज, एकपटक बाबु भएर सोच्नुहोस्, त्यति टाढाको भोटका राजासँग छोरीलाई विवाह गर्ने निर्णय पुनः विचार गर्नुहोस् ।
शिल्पीमा प्रेम बहसः प्रेमी–प्रेमिका छुट्टिने वितिक्कै किन सराप्छन् ? बिनु पोखरेल / बहसमा नारायण ढकाललाई प्रश्न थियो– वर्षौंदेखि प्रेम गरेको कोही छुट्टिने बितिक्कै सराप्न थाल्छ, के त्यो प्रेम हो ? ढकालको जवाफ थियो– शेक्सपियर भन्छन्, प्रेमी भनेका पागल हुन् । यिनीहरु प्रेमीलाई प्रेमले चिर्थोछन्,मार्छन, अनि फेरि ब्युँझाउँछन् । प्रेमीहरु त्यस्ता पागल हुन् जसले समाजको पर्खाल तोड्ने हिम्मत राख्छन् ।
तिम्री स्वास्नी र म फेरि चोरआँखाले मतिर हेरेर हाँसी र भनी— ‘नमस्ते ! आउँदै गर्नुहोला है !’ यो नितान्त औपचारिक वाक्य थियो तर यसैलाई मैले सहारा दिनुपर्ने चोरऔँला ठानेर समाएँ । अनि त तिम्रो स्वास्नीसँगको भेटघाट क्रममा यहाँ आवतजावत निर्वाध चल्यो ।
एनसेलले घटायो तीस देशमा फोन गर्दा लाग्ने शुल्क
काठमाडौ, १४ चैत्र - एनसेलका लोकल कलको दरमा विश्वका विभिन्न तीस मुलुकहरुमा कुरा गर्न सक्ने जनाएको छ । यो सेवा एनसेल प्रयोगकर्ताले यही सोमबार अर्थात् आजबाट लागु हुने छ ।
ट्विटर चलाउन अव पैसा तिर्न पर्ने
एजेन्सी- माइक्रोब्लगिंङ साइट ट्विटरले स्थापनाको ११ बर्षपछि आफ्ना सेवालाई वर्गीकृत गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म सम्पूर्ण सेवाको प्रयोग निशूल्क दिदै आएको ट्विटरले आफ्ना ब्यापारिक घराना र ठूला औधोगिक समुह लगायत चर्चित सेलिब्रिटीहरुलाई पेड भर्सन जारि गर्ने तयारी गरेको छ ।